Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGroup yaseGermany yaseGermany eyaziwa ngokuba ngumdlalo wesidlaliso; "UTurbo Timo". Ibali lethu leTimo Werner Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye neenyaniso ezininzi ezingekho phantsi (ezingaziwa) ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nesantya namandla akhe kummandla wokudlala. Nangona kunjalo, nje kuphela abalandeli abanolwazi abaninzi malunga neTimo Werner's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UTimo Werner wazalelwa ngomhla we-6th ka-Matshi kumama wakhe, uSabine Werner noyise, uGünther Schuh eStuttgart, eJamani. Ukhethiweyo ngezantsi uvela kwibukeka bakhe, uTimo wazalelwa iJamani ecocekileyo kunye nemfuza ephuma kwi-Heritage Deep.
Ukukhula, kwakukho ukuqinisekiswa okuphezulu ukuba ibhola liza kuba libizo lakhe. Kuyathakazelisa ukuba uyise u-Günther Schuh naye wayengumdlali webhola odlala umdlalo odlala phambili phambili kwiintsuku zakhe.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uTimo uvela kwikhaya elingavamile ngokuqala ngokuthobeka. Ukukhula, abazali bakhe bamfundisa iimpawu zokuziphatha eziyimfuneko, oko kukuthi; (Iinhlonipho kubo bonke, ukupha inceba / ukunceda, ukufumana umthwalo wemfanelo, ungalokhathaza nabani na ukubaluleka kokwabelana). NjengoTimo Werner ubeka;
"Xa ndihlala kunye nosapho kunye nabahlobo andinguye uTimo Werner umdlali webhola lebhola, ndiyena nje uTimo, unyana othobekileyo, umhlobo ... nje ngumfana onjengawo wonke umntu. Ukuba ndenza into engalunganga ayikayika ukuba undixelele! "
Abazali bakhe bahlala phantsi kunye neengqiqo kwenza uTimo ngokwakhe uhlonipheke kwaye ulungele kakuhle. Ngaphezu koko, wabonwa njengomsebenzi ophumelele ngakumbi kunoyise. UTimo Werner wabukhumbula xa wayesemncinci intsuku ngendlela awayeyisebenzisa ngayo ukukhupha iintaba kunye noyise ukuphucula amandla akhe kunye nokudlala. Oku kubonakala njengento yokwakha kwinqanaba lakhe elimangalisa, ayibonakali njengento ebaluleke kakhulu ngabazali bakhe. Kumama wakhe nobawo, imfundo mayize kuqala ngunyana wabo.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Career Buildup
Ukukhula, uTimo yayinkulu Mario Gomez umqhubi. Edibene nenyaniso yokuba uyise wayenomdlali webhola lebhola, umdla wakhe wayenomdla. Ngendlebe nodliwano-ndlebe, watshela ababhali beendaba ukuba wayekade eneepowers Mario Gomez egumbini lakhe xa wayeneminyaka eyi-11-12 ubudala njengoko kuchazwe ngezantsi.
Ngokungafani nabaninzi bebhola ebhola bebhola, uTimo wagqiba isikolo sakhe esiphakeme. Ngoku ka Bundesliga website esemthethweni. Abazali bakhe ngokukhethekileyo uSabine Werner, (unina) wayefuna ukuba unyana wakhe aqede imfundo yesikolo (ubuncinci, isikolo esiphakamileyo) ngaphambi kokuba ube ngumdlali webhola. Ngemva koko esikolweni, uTimo wayengumfundi oqhelekileyo kwaye engengomntu onothuthukiyo othe wafumana ihafu yeeyure zesikolo (ngenxa yokuzinikela kwebhola) wakwazi ukuphumelela kwi-2014 eneminyaka eyi-17.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
Nangona esikolweni, ukuthanda kukaTimo kwebhola kwambona ebhalisa kwiqela leqela lolutsha elibiziweyo TSV Steinhaldenfeld owamnika isigaba sokubonisa iitalente zakhe. Iqela liye lenza umsebenzi omangalisayo wokwakha isiseko somsebenzi wentombazana encinci efunekayo ukuba ihambe ngokugqithiseleyo ukuya kwinqanaba elincinci lolutsha kunye neVfB Stuttgart.
I-Timo isayinwe ku-VfB Stuttgart nje ekupheleni kwesikolo esiphakamileyo, ukufezekisa umnqweno womzali wakhe wokuya esikolweni ngaphambi kokugxila kwibhola.
Kwi-VfB, umsebenzi wakhe uthathe ukunyuka kweemeteor kwaye wazibonela ekhula ngaphezu kwazo zonke iindidi zolutsha ngokukhawulela umdla kumacandelo amakhulu nakwiYurophu. Oku akuzange kuguqulwe umlingiswa wakhe okanye indlela ephantsi komhlaba ukuya emsebenzini wakhe.
Kwi-2016, uWerner wahamba waya eRB Leipzig kuzo zonke iindawo. Wenza impembelelo kwangoko kwiqela lakhe elitsha, ebeka amanqaku e-21 kwiimidlalo ze-31 ngexesha lakhe lokuqala. Ukulawula kwakhe kwibhola lebhola laseJamani kwikhokhelo lakhe lesibili; RB Leipzig rocket fuel. Oku kwalandelwa yifowuni kwikomiti yesizwe yaseJamani Joachim Löw.
Ngokumangalisayo, Mario Gomez owake waba yindoda yakhe ngoku yaba ngumnye wokhuphiswano lakhe kwiqela lesizwe laseJamani.
Isishwankathelo, i-Timo yinyani, ilungu le-newfound of the new generation of Germany. Akungabazeki, italente enkulu kunazo zonke Mario Gomez.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Emva kokubona yonke impumelelo yakhe, Kuqhelekile ukuba umfundi wale nqaku ufuna ukwazi ukuba ngubani uTimo othabathayo. Ngaphandle kokungathandabuzeki, uTimo yinkwenkwezi kwindawo yokudlala. Ubuchule bakhe bokudlala, kunye nokwazi indlela yakhe yokuphila ngaphandle kwesiqalo kunceda ukwakha umfanekiso opheleleyo.
Xa ejonga ngezityhilo zakhe ezibonisa ubuhle bokwenene, kuthiwa uJulia ungumzekelo okanye mhlawumbi umzekelo wempilo.
Kodwa ngaphandle kweqinqa elinamandla ukubuyela emva kwamabango ethu, ukucingwa kukufumana ithagethi kwinqanaba elingenanto. UTimo uye wayethandana noStuttgart oyimodeli yokukhubazeka uJulia Nagler ukususela ekuqaleni kwakhe kwebhola. Ulwalamano lwabo lwalukhulile kwiimeko ezilungileyo zabahlobo kunye nokuphela kwothando lwenene. Bobabini abathandi bancinci kakhulu. U-Timo unyaka owodwa kunoJulia Nagler ongumfundi kwiYunivesithi yaseStuggart.
U-Julia kungenzeka ukuba akayintombazana enhle kunazo zonke eJamani kodwa into ebalulekileyo kukuba uTimo uye wanikela intliziyo yakhe.
Lo mbhangqwana ukhethe indlela yokufihlakelelwa kolwalamano lwabo ngoko ugcina ubudlelwane babo obunqabileyo. Ngethuba xa usondela kwiimidiya zentlalo kaTimo Werner, akukho buhlobo obonakalisa izithuba lubonakala kodwa makungakhohliswa ngento efihliweyo. Abaninzi benza uqikelelo lokuba uTimo ungatshatanga kwaye uphulaphule noJulia, nangona kunjalo, uthando lwababini lube lukhuni emva kokutshatyalaliswa kweendaba. Ngesinye ixesha emva kokuva iingxabano zokuhlukana kwabo, ababini abathandi banquma ukubelana ngesithombe sabo (njengoko kuboniswe ngezantsi) ngenjongo yokwesabisa abafazi ukuba becinga indoda kaYulia.
Ukugweba ngobomi bakhe kunye nokuqala okuthobekileyo, Kukwacaca ukuba i-football yaseYurophu phambili ayinakho kwiirekhodi zemicimbi edlulileyo.
Ewe, nangona akusiyo imidiya yoluntu, lo mbini ungaphuthelwa ukwabelana ngamaxesha amnandi ngenkqubela ukubonakala komntu kunye. Emuva kwi-2017, uTimo Werner kunye nentombi yakhe uJulia wenza ukuthanda kwabo kwi-2017 party party kwi-VIP kwindawo ye-Red Bull Arena kunye neendwendwe ze-600, kuquka neqela leBundesliga kunye nabo bonke abasebenzi. Ngezantsi umfanekiso wesibini esithandekayo.
Nangona kunjalo, uTimo kunye nentombi yakhe uJulia akenzanga iindaba zokuzibandakanya okanye izicwangciso zomtshato, kodwa njengoko zibukeka, usuku alukude kakhulu. Ukuqwalasela indlela abayithandana kakhulu ngayo, yinto nje yexesha ngaphambi kokutshata OKANYE HAYI. Ewe!! sathi. Basenokungatshatanga baninzi ngenxa yendlela yokuhlala kwintsapho kaTimo Werner eboniswe kwiCandelo loBomi boBomi ngaphantsi. Nangona kunjalo, i-LifeBogger iyabathanda into engcono, iminwe iwele!
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Ukuqala ngezinye iinkcukacha malunga nosapho lwakhe, kubalulekile ukuqaphela ukuba abazali bakaTimo Werner engatshatanga. Sazi njani oku? Xa uphando olucokisekileyo, sabona ukuba uTimo uphethe igama lokugqibela lonina esikhundleni sokuba uyise kuba nezizathu ezingaziwa. Nangona kunjalo ambalwa amawebhusayithi aseJamani afakazele ukuba bobabili uyise kunye nabazali bakhe abangatshatanga.
Njengoko kuchazwe ekuqaleni kweli nqaku, unina kaTimo unalo igama Sabine Werner ngelixa uyise ephethe igama Günther Schuh. Nangona kukho iinyaniso, into ebaluleke ngakumbi kukuba intsapho yakhe ibonwa phantsi komhlaba kwaye uTimo uyavuya ukuvela kuloo ndlu ephantsi.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukuhamba kunye neNgxaki yokuphefumula
Kwi-2017, uTimo Werner wabuyiswa endaweni emva kwemizuzu eyi-32 ye-RB Leipzig ye-Champions League umdlalo weBesiktas kwi-Vodafone Arena e-Istanbul, eTurkey. Oku kungenxa yokuba wayenomngcipheko wokuphefumula kunye nomoya owabangelwa ngabadlali abanomsindo. I-atmosphère enobubi eTurkey yashiya iTimo ingabonakali. Wenza okokuqala ngokuzama ngamandla ukukhusela isandi ngokubambelela iminwe yakhe ezindlebeni, ngelixa iqela lakhe lifuna ukuba lihlasele xa kwakukho injongo.
Ingxolo yaqala kakhulu kwaye ingalawulwa nguM Werner earplugs ngumqeqeshi wakhe. Emva kokuba ingxaki yaqhubeka, uTimo kwafuneka abe yimizuzu ye-31 endaweni yeChampions League, ngelixa icala lakhe lise 1-0 phantsi. Oku kwenzeka emva kokumisela ukuba ufuna ukushiya intsimi. Emva komdlalo umqeqeshi wakhe uthe;
"Akunakwenzeka ukulungiselela iqela lakho ngomoya ofana nale. Kwakukho isandi esisivayo esiyithandayo uTimo. "
"Kwam, njengomqeqeshi, kubalulekile ukubona ukuba ndiyintoni na onokuthembela kuye ngezihlandlo ezinje. umntu olungele ukuzikhusela, ukumelana nomsindo ovela kwiintanethi zaseTurkish. "
Umphathi weRB LEIPZIG uRalph Hasenhuttl kamva wabuza umlingiswa kaTimo Werner ngokucela ukuba angene endaweni yeBesiktas.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -IiNkcazo zeSantya
UTimo Werner uye wavala imizuzwana ye-11.11 ngaphezu kweemitha ezili-100. Yile ndlela ayenayo ngayo igama lakhe lokuqala lomnxeba; 'Turbo Timo'ngamajelo aseJamani ngenxa yokuhamba kwakhe.
Ijubane lakhe kunye nekhono lakhe lobuchule kwi-pitch liye lanikezela ukulinganisa okulandelayo kweFIFA. Edibene nomntwana wakhe omncinci, ubonakala njengendlela yokudluliselwa ekujoliswe kuyo kubadlali beFIFA abadlala League League.
Emva koko ngonyaka wakhe wokugqibela esikolweni, uTimo owayengumnyaka we-17 wayegijimitha ngamanitha angama-100 kwiminitha engama-11 kuphela.
Ithebhile yeTimo Werner yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Dream Dream
Njengoko ngexesha lokubhala, uTimo Werner unesivumelwano kunye neRB Leipzig esetyenziselwe ukugcina kude kube yi-2020. Nangona kunjalo, uTimo uye wabonisa ukuba amaphupha okufudukela kwiNkulumbuso yaseNkulumbuso kwaye ukuba uyayithanda imanchester United ngenxa yembali yabo kunye ne-phylosophy.
"Ewe, ukudlala kwiNkulumbuso yaseNkulumbane kuyiphupha kum. Ndingathanda ukudlala iiklabhu ezimbini okanye ezintathu, kwaye iManchester United yenye yezo nkampani. Kodwa mhlawumbi kwiminyaka embalwa ezayo-kamva, xa iNgesi yam ilula kangcono! Ndikhululekile kakhulu kwiRB Leipzig, kodwa "
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda i-Timo Werner Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
IDrama yeDlalo yeDlalo
I-RB Leipzig kwidayari yeBhola ekhatywayo
I-Kai Havertz Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
IJoel Matip Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Ethan Ampadu Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ULeon Goretzka Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Niklas Sule Ibuntwaneni Ibali Plus Untold Biography Facts
U-Andre Schurrle Ibali leNtsapho kunye ne-Untold Biography Facts
Julayi 28, 2018
Februwari 11, 2018
I-Ilkay Gundogan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Mario Gotze Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Novemba 12, 2017
UMarco Reus Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts